Etu esi Ejikwa Ihe Ochicho Gi Oria na Ighazi Leptin Resistates - Rebates Fitness
Mbido » blog » Etu esi Ejikwa Ihe Ochicho Gi Oria Gi Na Ighazo Nzoputa Leptin
Ọtụtụ mmadụ n'ụwa niile na-eguzogide ọgwụ leptin, ọtụtụ amaghịkwa ya. Dietdị nri a na-eri n’oge a bụ nnukwu ihe. Iri ọtụtụ sugars, ọka, na nri ndị a gbanyere mkpọrọgwụ na-eme ka mkpụrụ ndụ abụba gị rikpuo ahụ gị na leptin. Mee ya n'ụzọ zuru ezu, ahụ na-agbanwe site na ịmalite iguzogide leptin.
Usoro a na-arụkwa ọrụ n'otu aka ahụ etu ndị mmadụ si eguzogide insulin. Ọ na - eme ka ahụ ghara ịgwụ gị ike, ike gwụrụ gị, na agụụ na-agụ gị oge niile ọbụlagodi mgbe ị na-eri ụzọ karịa ka ahụ gị chọrọ. Ọ bụrụ n’inwe agụụ mgbe niile na ị na - achọ mgbe niile maka nri ọzọ iji dọọ gị ruo oge nri, ọ ga - ekwe omume na ị ga - eguzogide leptin.
Nchịkwa agụụ (karịsịa agụụ maka nri na-adịghị mma) na-emeri ihe mgbaàmà nke iguzogide leptin. Anyị na-adụ ọdụ ka ịnwa iwepụta nri gị ka ọ dịkarịa ala elekere anọ n'etiti ha, ma hapụkwa ka ị rie nri ọ bụla. Ọ bụrụ na nke a siri ike maka gị, enwere ohere dị ukwuu na ị na-eguzogide leptin. Ehi ụra na erighị nri nke ọma nwere ike ịta ụta maka nsogbu mgbochi leptin.
Ọ bụrụ na ị na-eri nri ma na-achọ ibelata ibu ngwa ngwa, nke a nwere ike ijikọ nguzogide leptin gị n'ụzọ dị ukwuu. Ọ bụ ihe na-adọrọ adọrọ ibelata oke kalori gị mgbe ị na-achọ ibelata ibu. Agbanyeghị, n'oge ọ bụla nke igbochi calorie dị ukwuu nwere ike ịla azụ, na-eme ka ahụ gị gbanwee site na ịkwụsị ọbụna iguzogide leptin. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na mgbe mgbanwe caloric dị na mberede, ahụ gị na-eme ihe niile dị ike iji jigide abụba echekwara. Nke a na - eme ọtụtụ mmadụ na mberede mgbe ha gbalịrị ịgbanwe na nri Paleo a ma ama.
Nchịkọta nke nrụgide dị elu na ụra zuru ezu na-eme ka cortisol na ogo hormone gị. More cortisol na-ebute nrụgide na ụra karịa, na-eduga na usoro ọjọọ nke na-agwụ n'otu ụzọ ọ bụla: ahụike na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ị naghị eme ihe iji dozie nrụgide gị ma ọ bụ ọ dịkarịa ala ihi ụra awa asaa ma ọ bụ asatọ kwa abalị, ị na-eme onwe gị ikpe na-ezighị ezi. Nnukwu ogo cortisol na-eme ka nguzogide leptin dị, ma ọ bụrụ na a chịkwaghị ya, nwere ike ibute oke ibu, mbufụt, yana ihe egwu dị ukwuu nke ọrịa obi.
Ọ bụrụ na ị na-a sugarụbiga shuga ókè, n'agbanyeghị na nke a nwere ike ịbụ otu akụkụ dị mkpa nke nguzogide leptin gị. Sugar nwere ike ịbụ ihe ojoo maka ahụike gị n'ọtụtụ usoro. Enwere ihe dị ka shuga nke na-ejide anyị ma na-agbanye anyị ugboro ugboro. Ma ọ masịrị anyị ma ọ bụ na ọ masịghị shuga nwere isi dị mkpa na anyị. Ọ bụrụ na ị na-agụ nke a, ọ ga-abụrịrị na ị ghọtara, ma nwee ahụmịhe mbụ, nke mma a. Sugar abughi nani ihe oriri, obu mmanye; ọ dịghị ihe dịka ịkwụsị mgbe ọ bụ naanị "ngwaahịa" ngwaahịa shuga ..
Enyere anyị ọtụtụ ihe kpatara agụụ shuga anyị: ụbụrụ ụbụrụ na-achọ obi ụtọ, ụkọ ịnweta, nje na-eri nri, erighị ihe na-edozi ahụ, atụmatụ nri na-ezighi ezi, omume omume, oke nnu, nsogbu nsogbu mmụọ, ụra, nchekasị… na nke anyị họọrọ, enweghị ọzụzụ. Anyị anaghị enwe ihe nfu maka ebumnuche nke ị ourụ ọgwụ ọjọọ, mana ịmara ezughị oke ịgbanwe anyị ma ọ bụ omume anyị. Ọ bụrụ na ịmara zuru ezu, anyị niile ga-enweta nrite ọla edo na kpakpando ọla edo na ebe ọ bụla nke ndụ anyị. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla, ịmara naanị na-eme ka ọ ka njọ karịa… anyị maara nke ọma karịa gịnị kpatara na anyị anaghị eme nke ọma? Nghọta bụ ihe ọzọ na-eme ka anyị na-echegbu onwe anyị.
Omume na-esote nghọta bụ ịnwa ma chọta azịza maka ya. Anyị na-eji aka anyị etinye aka na mbọ iji gbanye shuga anyị hụrụ shuga n'anya site na ịga n'ihu. Nke a abụghị usoro ihe mgbu na-enweghị ihe mgbu, na naanị mgbe anyị chere na anyị na-eme ala ihe ga-eme ka anyị tufue ma anyị nọ na ozi ịkọtara shuga ọ bụla anyị nwere ike ịchọpụta ma laghachi na mbido.
Mgbe anyị họọrọ ịdabere na shuga anyị, anyị na-awakpo shuga n'onwe ya, anyị na-ekpocha kichin, kpochapụ ụlọ niile ma kwupụta shuga onye iro. Ma nke a dị mma… belụsọ na ọ naghị arụ ọrụ. Mgbe anyị mepụtara atụmatụ ọrụ dị ka nke a, anyị ga-eme ihe abụọ na-aga n'ihu ma soro ntuziaka na-ezighi ezi. Anyị anaghị ekwu banyere ihe na-eme n'ezie.
Ihe nzuzo: gbachitere ezi okwu, ọ bụghị akụkụ-mmetụta nke okwu a. Ọchịchọ shuga bụ mmetụta dị n'akụkụ, ha bụ ihe ịrịba ama nke ezigbo nsogbu, na ịgwọ ihe ịrịba ama anaghị eme ka nsogbu ahụ nwee ike. Nanị usoro iji zụlite ezi, mgbanwe dị ogologo bụ iji dozie ihe kpatara nsogbu shuga ndị a dị egwu… ma ọ bụghị na ị na-emebi oge gị ma na-etinye onwe gị maka binge shuga ọzọ.
Gịnị kpatara ya? Ọ bụ nguzogide leptin nke anyị kwurula banyere ya na mbụ. Otu ụzọ isi chịkwaa agụụ shuga gị ma tụgharịa leptin nguzogide bụ na mgbakwunye mgbakwunye eke, nke bụ ngwakọta nke 22 ihe niile sitere n'okike nke na-emekọ ahụ gị iji weghachite nkwụsi ike leptin na ọ bụ mmetụta ya. Mgbe nguzogide leptin na-apụta n’ahụ anyị, anyị nwere sistemu na-adịghị arụ ọrụ. Ndakpọ a ga-emepụta mgbaàmà nsogbu. Ọ bụghị naanị na nguzogide leptin na-eme ka agụụ na-agụ ya kama ọ na-amata agụụ! Nke ahụ bụ uzommeputa maka ọdachi! Ọbụghị naanị na agụụ ga - agụ gị kama ị ga - enwe agụụ ụdị nri kacha njọ ga - ekwe omume…
Anyị nwere ike ịkatọla ihe ọ bụla ọzọ dị n'okpuru anyanwụ maka enweghị ike anyị ịkwụsị ịnweta kuki na-esote… ihe niile mana nkwụsi ike leptin. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ ezigbo mmegharị na ngbanwe ị ga --achị ịkwado nguzogide leptin ma mee ihe “imezi” ya.
Leptitox bụ naanị ụzọ maka isi rute nsogbu na-arịwanye elu nke nguzogide leptin, na-atụle na e mepụtara ya iji lebara ya anya. Leptitox bụ ngwakọta nke 22 a họọrọ nke ọma, amino acid na vitamin na ike iji nyere ahụ gị aka ịkọwapụta ihe kpatara ezigbo nguzogide leptin. Ọ ga-agbanwe ihe ọ bụla ị chere na ị maara gbasara ifelata.
Ihe 22 dị na Leptitox rụkọtara ọnụ iji mee ihe atọ: nyere ahụ aka ịtọpụ, chịkwaa agụụ na akwalite oke ibu ahụ ike. Kwa ụbọchị bụ ọgwụ 3 a na-ewere otu ugboro n'ụbọchị, ọ na-adụ ọdụ ka iwere obere capsules ndị ahụ 2 nkeji 2 tupu ị rie. Ọ bụrụ na ị bụ akara ọhụụ maka ịnwe ihe mgbakwunye, anyị na-adụ gị ọdụ ka itinye ntọala na ekwentị gị iji nyere gị aka nyere gị ndụmọdụ ka ị were ha tupu nri gị.
Ọ bụrụ na ị na-ala azụ maka ịlele ngwaahịa a, Leptitox na-eji ego ụbọchị 60 zuru oke, yabụ na ị nweghị ihe ga-efunahụ ma ọ bụrụ na mgbakwunye a anaghị arụ ọrụ maka gị. Lelee vidiyo a ka ịmatakwu gbasara Leptitox taa ma nwalee ya.